Pelle oo talo ku haboon siiyey da’yarka carcarka kusocda ee Marcos Rashford kahor bilaabashada Euro 2016 | Hoyga Barbaarta Somalistars
Home » Ciyaaraha » Pelle oo talo ku haboon siiyey da’yarka carcarka kusocda ee Marcos Rashford kahor bilaabashada Euro 2016
Pelle oo talo ku haboon siiyey da’yarka carcarka kusocda ee Marcos Rashford kahor bilaabashada Euro 2016
Waxaa Qoray: admin /////////// Taariikh: 2-06-16 3:09 PM Halyeeyga xulka Brazil Pele ayaa kula taliyey Marcus Rashford in uusan muujin wax cabsi ah maadaama isaga oo aad u dhallinyar uu isku diyaarinayo ciyaaraha Euro 2016 oo uu u matali doono wadankiisa England.
Ka dib markii uu qeybtii labaad ee xilli ciyaareedkii dhammaaday wacdaro ka dhigay kooxdiisa Manchester United wiilkaan dhallintayar ayaa lagu daray 23ka ciyaaryahan ee xulka England u matalaya tartanka ka dhici doona France, oo bilaaban doona 10ka bishaan June.
Rashford ayaa shabaqa soo taabtay kulankiisii ugu horreeyey horyaalka England Premier League iyo kulankiisii ugu horreeyey UEFA Europa League ee uu u saftay Man United, 18 sanno jirkaan ayaa noqday ciyaaryahankii ugu dhallintayaraa ee kulankiisa ugu horreeya gool u dhaliya xulka England ciyaartii ay guusha 2-1 ah ka gaareen xulka Australia Isbuucii tagay.
Pele – oo lagu tilmaam ciyaaryahankii ugu fiicnaa kubadda cagta abid ka dib markii uu seddax jeer ku guuleystay Koobka Adduunka, isagoo markiisii ugu horreysay ku qaaday da’da 17 sanno jirka, ayaana talo siiyey Rashford.
“Maanta lama qiimeeyo dhallinta uu ciyaaryahanku jiro. Waxaa muhiim ah qaabka aad isku diyaariso. Laakiin marnaba, marnaba, marnaba, ha cabsan,” Pele ayaa sidaasi yiri iyadoo xulka England uu isku diyaarintiisa Euro 2016 kusoo xiranayo kulan saaxiibnimo oo uu caawa oo Khamiis ah ku wajihi doono xulka Portugal.
“Waxaan wiilkaan u rajeynayaa nasiib la mid ah midkii isoo maray nolosheyda kubadda cagta. Cadaadis weyn ayaa saaray laakiin waxaan u maleynayaa inuu kalsooni badan qabo isla markaana aaminsan yahay nafsaddiisa.
“Ka hor inta aanan markii ugu horreysay ku guuleysan Koobka Adduunka, tababareyaasheydu waxay i dhihi jireen: ‘Halkaan waxaad ku timid farsamadaada, waxaadna tahay ciyaaryahan wanaagsan, ha cabsan sababtoo ah ciyaartoyda kale adiga waa ay kaa dhallin badan yihiin’. Farriintaas ayaana ah midda aan sidoo kale u dirayo Rashford.”
Iyagoo ku jira safka Group B, England waxay wajihi doonaa Russia 11ka bishaan June ka hor inta aysan foodda darin xulalka Wales iyo Slovakia.